बिहान आलस्य महसुस हुन्छ ? यो योगासनले गर्न सक्छ फाइदा !! | सुदुरपश्चिम खबर
योगका फाइदाहरू असंख्य हुन्छन् । स्वस्थ शरीरको लागि योग, सुन्दर अनुहारको लागि योग, दीर्घरोग नियन्त्रणदेखि फिट रहन पनि योगले फाइदा गर्ने गर्छ । मात्रै योगको आसन फरक हुन सक्छ ।
यो आसन दिनको कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ । तर बिहानको समयमा गरेको योग अरू समयको भन्दा बढी प्रभावकारी हुने गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)